जवानीको ऐना मेलिना राईतिरै टल्किएपछि (भिडियोसहित) « Rara Pati
जवानीको ऐना मेलिना राईतिरै टल्किएपछि (भिडियोसहित)
१५ भाद्र, काठमाडौं । मेलिना राईको आवाज जति मिठो छ उनको सुन्दरता पनि उत्तिकै खुलेको छ । झट्ट हेर्दा कुनै चलेको मोडल या नायिकाजस्तै देखिने मेलिना राईका दर्जनौं गीतहरू हिट छन् । संगीत क्षेत्रमा काम, दाम, नाम सबै कमाएकी मेलिना राईलाई बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिन के ले रोकिरहेको छ ? भन्ने चर्चा सांगीतिक माहोलमा बेलाबेलामा चल्ने गर्छ ।
यतिबेला मेलिना राईको यस्तै भावको ‘जवानीको ऐना हजुर आफैतिर टल्केको छ’ बोलको गीत बजारमा आएको छ । यो गीतको पहिलो लाइन नै मेलिनाको वास्तविक जीवनमा गज्जवले मेल खाएको देखिन्छ । जवानीको ऐनाले मेलिनालाई केहिले बिहे गर्ने ? जवानी घर्किएला भनेर प्रश्न तेस्र्याउने बेला पनि भएको छ ।
अर्जुन रत्न भिखारीले लेखेका शब्दमा सुनिल मास्केले संगीत भरेका छन् । रिकेश गुरूङको संगीत संयोजन, किशोर थापाको ध्वनी सम्पादन रहेको ‘जवानीको ऐना’ ए वन म्युजिसियन स्टुडियोमा रेकर्ड भएको हो ।
युवराज वाइवाको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोमा नग्मा श्रेष्ठलगायतको अभिनय हेर्न सकिन्छ । मनिता गतराजको कोरीयोग्राफी, उत्सव दाहालको छायाँकन रहेको गीतको भिडियो सम्पादन विकास दाहालले गरेका हुन् । एम.के प्रोडक्शन आधिकारिक युट्युव च्यानलमा गीतको भिडियो हेर्न सकिन्छ ।
कन्या कुमारी रहिरहेसम्म जवानीको ऐनाले मेलिना राईतिरै औंला सोझ्याई रहनेछ । यो गीत गाउदै गर्दा मेलिना राईलाई पनि यस्तै अनुभुति भयो होला कि ! समाचार लेखकलाई मात्रै यस्तो लागेको हो भने काल्पनिक दुनियाँको संयोग मात्रै हुनेछ ।
अर्जुन रत्न भिखारी
ए वन म्युजिसियन स्टुडियो